Amaan Iyo Bogaadin Ku Socota Isimada Iyo Ergada Reer Tanadland Oo Umadda Tanadland Ugu Baaqay Shirka Taariikhiga Ah – Codka Qaranka Tanadland
Suldaan Maxamed Jaamac Shire “Hogaamiyaha Guud Ee Isimada Iyo Ergada Reer Tanadland Oo Shirka Dowlad Usamaynta Reer Tanadland Ku Dhawaaqay.
Aniga oo ku hadlahaya codka umadda karaamaysan ee reer Tanadland waxaa igu waajibay inaan maqaal amaan iyo bogaadin ah aan u diro hogaamiye yaasha Tanade-weyne ee qiimaha badan. Waxaa igu waajibey inaan halkaan ku xuso oo u hambalyeeyo, shacbiweynaha Tanade-weyne ee hogaamiye-yaashooda iyo ergada reer Tanadland ku soo dhaweeyey magaalada Garoowe. Mudadii 3-da bilood ahayd oo ay ergada reer Tanadland ee gobalada Bari iyo Mudu ay ku sugnaayeen magaalada Garoowe, qaraamaadkii ku baxay sidaad la socotaan waxaa inaga kaafiyey beelaha reer Tanadland ee nugaaleed. Marka Tanade nugaaleed amaan gaar ah iyo mahadnaq balaaran ayey ka mutaysteen Tanade-weynaha kale.
Dabcan lugooyada iyo war-wareejinta beesha Habar-majeerteen ay luggooyeen ergo reer Tanadland ah oo 500 oo nin ka badan mudo 3 bilood ah. Waxaan tolkay xasuusinayaa inay tahay jaa’ifo balaaran oo loo geystey hogaamiyeyaasha reer Tanadland. Loona baahanyahay inay ka dabaaqaan wakhtiga ku hoboon umadda reer Tanadland. Dadaalkii hogaamiyeyaasha iyo shacabiweynaha reer Tanadland, cadowgeena soojireenka ahi wuxuu iskudayey in uu fashiliyo. Dabcan shirarkii fashilmay ee Garoowe rabigii noo roonaa waa kii fashiliyey. Walow aan ka jeclaan lahaa in tolkay iyagoo aan la shirin naagaha habar-majeerteen, oo aan marmarsiinyo ka dhigan “Habar-majeerteen ayaa shirkii wax-wadaqaybsiga carqaladaysay”. Inay si xarago iyo sharaf leh ay aayahooda uga tashadaan oo ay dowlad samaystaan.
Sidoo kale waxaan halkaan uga soo jeedinayaa amaan iyo bogaadin shacbiweynaha reer Tanadland, oo sida qiirada iyo xamaasadu ku dheehantahay u soo dhaweeyey shirka ay iclaamiyeen in laysugu yimaado hogaamiyeyaasha reer Tanadland. Una diyaar ah inay ka qayb qaataan dhismaha iyo taabogelinta dowladgoboleedka looga dhawaaqidoono shirka Gaalkacyo.
Hogaamiyeyaasha reer Tanadland oo ugu baaqay umadda reer Tanadland inay isugu yimaadaan shirka dowlad u samaynta Tanade-weyne, ayaa waxaa hoogaaminaya 4 isim iyo 22 nabaddoon oo karaamaysan.
1. Suldaan Maxamed Jaamac Shire “Hogaamiyaha Guud Ee Isimada Iyo Ergada Reer Tanadland
2. Suldaan Subayr Xaaji Maxamuud Cali
3. Garaad Cali Aadan Diini
4. Ugaas Maxamuud Shoole
5. Caaqil Maxamed Axmed Faarax afjabay
6. Nabaddoon Aadan Warsame Cismaan
7. Caaqil Maxamuud Gaarcad
8. Nabaddoon Saciid Faarax Nuux (Garas)
9. Nabaddoon Maxamed Cabdi Kuus
10. Nabaddoon Bashiir Cali isaxaaq
11. Nabaddoon Jaamac Cabdi Gaawe (Basbaas)
12. Nabaddoon Maxamed Guuleed Muuse (Garcase)
13. Nabaddoon Axmed – nuur Sheekh Xasan Nuux
14. Nabaddoon C/Laahi Orhaye
15. Nabaddoon Cabdi faarax Gaadakeen
16. Nabaddoon Mxamuud Geeleeye (Maygaaag)
17. Nabadoon C/Laahi Cilmi Gaadane
18. Nabaddoon Siciid Jaamac Roorshe
19. Nabadoon Khaliif Faarax Nuux Kilic
20. Nabaddoon Cabdinuur Oogaroor
21. Nabaddoon Cabdi Dacar Diini
22. Nabaddoon Abshir Ahmed Maxamed
23. Nabaddoon Cabdi Maxamed Yuusuf
24. Caaqil Cabbaas Xaaji Maxamuud Cali
25. Caaqil Maxamuud Maxamed Jaamac Qayqay
26. Caaqil Cabdinaasir Cigaal Faracade
Waxaa kaloo hogaamiyeyaasha iyo ergada reer Tanadland shirkii Garoowe kala qaybgalay oo talada la wadaagey 6-da xildhibaan iyo senaterka reer Tanadland ugu jira labada aqal ee dowladda federaalka.
Waxaa kaloo wufuuda qaraarka shirka Gaalkacyo ku dhawaaqday qayb ka ahaa 470 ergey oo ganacsato iyo aqoonyahano isugujira oo shirarkii Garoowe ku soo quustay.
Qof walba oo reer Tanadland ah waxaa saaran masuuliyad gaar ah oo loo baahanyahay in si sharaf iyo xarago ku jirto uu u guto. Xilka ugu weyn oo na saaranina waa’in ayno dhawro oo aynu naf iyo maalba u huro danaha iyo sharafta umadda karaamaysan ee Tanadland. Aniga oo ku hadlahaya codka warbaahinta umadda karaamaysan iyo kaygaba, waxaan u mahad celinayaa hogaamiyeyaasha umadda karaamaysan ee Tanadland. Shacbiweynaha umada karaamaysan ee Tandland na waxaan ku boorinayaa inay dadaal kooda ay 10 jibaaraan oo ay naf iyo maalba u huraan sidii loo hirgelin lahaa himilada umadda Tanade-weyne. Kaalinta uga aadanna ay ka qaataan dhismaha dowladda lagu talojiro in loodhiso umadda Tanadland.